news2dago | Martsa 2009 | 3
[Ankapobeny ] 14 Martsa, 2009 12:23
Tsy misy ilana azy ny fifidianana
Mivoatra foana ny toe-draharaha ankehitriny. Mahazo vahana indray ireo mpanohana ny tgv na dia tsy dia mahoraka loatra etsy @ 13mai t@ fotoana nandalovanay teny an-toerana io maraina io. Ny eny Iavoloha kosa tsy dia haiko loatra izay hamaron'ny olona eny satria tsy teny aho ka tsy afaka ny hanely tsaho eto koa. Toy ilay niely omaly oe hanafika eny Iavoloha hono ny fiara mifono vy.
Efa atomotra ny fandresena hoy ny TGV. Mbola prezida ihany ra8 hoy ny TIM??? Tsy hita intsony izay marina @ ity raharaha ity. Tonga teny @ 13 mai moa Ingahy Jacques Sylla niaraka t@ i Andry Rajoelina androany. Gaga ny akamaron'ny olona ny tenako kosa tsy dia taitra loatra satria rangahy io efa fantatra fa nandalo tao @ PSD dia nivadika AREMA dia nivadika UNDD dia lasa TIM dia miandry izay hiakatra eo indray izy izao lol.
Maro karazany mihitsy ny palitaon'ireto mpanao politika ireto ka.
Tsy izy irery fa saika izy rehetra dia mitovy fa tsy maningana akory. Dinôzôro @ palitao mivadibadika daholo. Tsy misy mendrika hofidina izany satria tsy mena mivadika.
Noho izany amiko dia tsy misy ilana azy izany fifidianana izany aty @ tany mahantra ny vola ihany no miteny aty. Ary mbola hiteny foana izy any aorina. Lany andro fotsiny mifidifidy izany fa na iny ahongana an-dalambe toy ny mahazatra na iny ny mpitondra mihitsy no manongana azy @ alalan'ny didy hitsivolana. Tsy hitako izay ilana azy izany. Tsy misy hanaja akory ny safidinao avy eo.
[Ankapobeny ] 13 Martsa, 2009 07:27
Hovonoina ny Prezida Ravalomanana
Efa tafakatra eny @ Capsat ny fiara mifono vy avy eny Imeritsiatosika. Ary efa misy ampahana miaramila mpihoko tafiakatra eny @ manodidina ny Lapan'Iavoloha. Efa nody andakazery koa ny akamaron'ireo mpiambina manokana ny Filoha. Inona no hitranga androany? Andriamanitra ihany no mahalala izany.
Nihaona mangigina teny Mahazoarivo koa ny Praiminisitra sy Ingahy Monja Rondefo izay praminisitra noetndren'ny tetezamita. Tsy nisy nipika ny dinika t@ izany.
(sary La vérité)
Misitery ny zavatra hitranga androany. Izaho manokana aloha dia efa tany @ alatsinainy alina tany no efa nahazo antso an-tariby t@ olona mikasika an'io fanafiana eny Iavoloha io. Fa niniko tsy nosorata teto mihitsy aloha sao dia mba tsaho ihany ilay izy. Ankehitriny anefa dia efa ny radio mihitsy no milaza izany ka tsy hitako intsony ny antony tsy anoratako azy eto.
(Sary midi madagasikara)
Miandry izany ny rehetra ary tsapa ihany fa tsy milamin-tsaina ny rehetra naheno ilay filazana avy @ masoivoho amerikanina hampody tsy misy hatak'andro ireo teratany amerikanina mipetraka sy monina eto Madagasikara. Enga anie ka hilamina ny tanana izay no angatahiko mafy @ Andrimanaitra fa tsy hisy ahazo tombotsoa eo akory raha misy ny korotana sy ady an-trano.
[Ankapobeny ] 09 Martsa, 2009 08:55
[Politika ] 03 Martsa, 2009 08:06